Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka Ubuntu | Site na Linux
Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ maka Mozilla Firefox, ihe nchọgharị weebụ nke na-ebubata na Ubuntu, mgbe ahụ ị ga-ahụ ndepụta nke nhọrọ kacha mma na ihe nchọgharị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ Ubuntu. You chọrọ ịma ha? Anyị malitere!
4 Nwere Obi Ike
6 Wayszọ 3 iji chebe ihe nchọgharị weebụ megide ndị na-agba ọsọ
6.1 Jiri ihe nchọgharị nke na-abịa na VPN
6.2 Echekwala okwuntughe gị
6.3 Họrọ nhọrọ banyere ndọtị na mgbakwunye ị na-eji
Dị ka m kwuru na mmeghe, Firefox bụ ihe nchọgharị weebụ na-abịa na ndabara na Ubuntu maka njirimara ya na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma nke dị taa.
Ọ dị nnọọ mma, nwere ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha nke mgbakwunye na ndọtị yana ọrụ dị iche iche yana gụnyere nchọgharị nkeonwe. E wezụga nke ahụ, ọ kwụsiri ike na ngwa ngwa. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ndị ọzọ, nwee olile anya na m ka nwere 4 ọzọ. Ana m agwa gị!
Ọ bụrụ na enwere nchọgharị na-achọghị nnukwu ngosi, ọ bụ Google Chrome. Onye na-amaghi? Bụ nchọgharị par kacha mma na ọ bụ na dị ka ihe uru n'elu Firefox i nwere ike mekọrịta gị niile nchọgharị na akaụntụ Google gị.
Maka ndị ọzọ, ọ dịkwa mma ebe ọ bụ na agbakwunye ya na ndọtị na ngwa ọrụ nke nwere ike ime ka ihe dịrị anyị mfe ma a bịa na nchọgharị. Na nchekwa, ị nwere ike iji kpochapụwo malware blockers site na ịtinye ha na ihe nchọgharị gị ozugbo arụnyere.
Otu n'ime ọkacha mmasị m. Opera bu otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe nchọgharị na ị ga-ahụ maka Ubuntu. Abịa na ọrụ VPN nke i nwere ike n'enweghị ihe nchoghari na internet mgbe gị data bụ nchebe. Na mgbakwunye, ọ na-etinye ihe mgbochi malware raara onwe ya nye na ngọngọ ad nke na-eme nchọgharị ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ ihe nchọgharị mechiri emechi, ọ chọghị mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị.
Ihe nchọgharị obi ike bụ otu n'ime ihe ọhụụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya nke na-aga n'ihu ngwa ngwa ma tinye onwe ya ngwa ngwa otu n'ime nhọrọ kachasị mma mgbe ị na-ahọrọ ihe nchọgharị weebụ echedoro maka Ubuntu ma obu sistemu ozo ozo.
Ma ọ bụ na Nwere Obi Ike, site na igbochi mgbasa ozi na ịkọwa ya dị ka nhọrọ, na-akwụ ndị họọrọ ile ya anya yana ndị na-emepụta ọdịnaya na nnọchite gị, na-enye ohere nhicha na ngwa ngwa nyocha ngwa ngwa na mgbakwunye inwe ụfọdụ atụmatụ na nchekwa pụrụ iche larịị dị ka nchebe na ezoro ezo https njikọ.
N'ikpeazụ, Vivaldi bụ ihe nchọgharị weebụ Ọ bụ ezie na ọ dị ka Opera, ọ na-arụ ọrụ ndị nwere ọdịiche dị iche na Opera na ndị ọzọ niile. Isi okwu ya doro anya na mgbanwe Ya mere ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị na-achọ na ịchọrọ ihe nchọgharị weebụ ị nwere ike ịhazi ruo na nke kachasị, ikekwe nhọrọ gị bụ Vivaldi.
Hazie ahụmịhe gị nke ọma. Site na njikwa tab na ụzọ mkpirisi keyboard, ibe edokọbara, iwu, wdg. Ọzọkwa, ịnwere ike ịdekọ ihe ka ị na-agagharị na ịntanetị ma ọ bụ were nge ihu ihuenyo zuru ezu, wdg.
Wayszọ 3 iji chebe ihe nchọgharị weebụ megide ndị na-agba ọsọ
Na-echegbu onwe nche nzuzo gị na .ntanetị? Họrọ ezigbo ihe nchọgharị dị mkpa iji hụ na edobe data gị. mana ihe ahụ, nọrọla ebe ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ihe nchọgharị gị nọrọ n’udo pụọ n’ihe egwu ndị haja na-enye, lee usoro atọ iji gbochie ha.
Jiri ihe nchọgharị nke na-abịa na VPN
Jiri ihe nchọgharị ka Opera nke na-abịa na arụnyere VPNAgbanyeghị, ọ bụrụ na ị na -ahọrọ ihe nchọgharị ọzọ n'ihi na ọ nwere atụmatụ na -amasị gị karịa, ị nwere ike budata Linux VPN mgbe niile iji mee ka nchekwa gị sie ike.
You họrọla ihe nchọgharị weebụ ị ga-eji na Ubuntu? You chere ụfọdụ n'ime nche nhọrọ na m gosiri gị na mbụ?
Echekwala okwuntughe gị
Agbanyeghị na ọ dị nfe maka ihe nchọgharị iji chekwaa okwuntughe gị iji tinye peeji niile ị na-agakarị ngwa ngwa, eziokwu bụ na ikwe ka ihe nchọgharị weebụ chekwaa data dị nro na-etinye anyị n'ọnọdụ na-adịghị ike megide hackers. Onye ọ bụla hacker na-enweta ịnweta kọmputa gị ga-enwe ya nnọọ mfe, Don't cheghi?
Họrọ nhọrọ banyere ndọtị na mgbakwunye ị na-eji
Ngwa ole na ole ị na-enye ohere ịnweta data gị, nke ka mma. Ya mere họrọ mgbe ị na-etinye mgbakwunye na ndọtị na ihe nchọgharị gị n'ihi na mgbakwunye na eziokwu ahụ nwere ike imetụta ọsọ nke nchọgharị gị, ọ ga-ekwe omume na ị na-enye ikikere karịa ka i chere.
Dị ka ị hụrụ na e nwere nnọọ ole na ole na-akpali ọzọ mgbe ị na-ahọrọ ndị ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka Ubuntu. Anyị ahụwo 5 kachasị ewu ewu taa mana n'ezie ị matara ụfọdụ. Ihe ọbụla ị họọrọ, ihe kachasị mkpa bụ ihe ị ga - eme bụ iji hụ na nchedo kọmputa gị oge niile iji mee ka ndị na - agba ọsọ ghara ịbanye. Have nwere ihe nchọgharị kachasị amasị gị? Hapụ m ihe ị ga - ekwu n’okpuru!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka Ubuntu
Yandex kwesiri inwe ebe di na ntule a
Banyere Opera, ị na-ekwu na "dịka ọ bụ ihe nchọgharị mechiri emechi, ọ chọghị mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị", eziokwu ahụ bụ na anaghị m aghọta mmekọrịta gị na ya n'etiti eziokwu ahụ bụ na ọ mechiri emechi yana ọ chọghị ngwa. Opera anaghị achọ mgbakwunye n'ihi na ọ na-etinyekọrịta mgbasa ozi na malware blocker, yana nke ya VPN, mana nke ahụ enweghị njikọ na eziokwu na ọ mechiri emechi, Google Chrome ma ọ bụ Vivaldi bụkwa isi mechiri emechi na nke ahụ apụtaghị na ọ ọ bụghị Ha nwere ike iji ụfọdụ plugins iji melite ahụmịhe Internetntanetị (n'echiche m uBlock Origin dị mkpa).
Banyere ndụmọdụ ka ị ghara ịchekwa okwuntughe na ihe nchọgharị ahụ, ọ dị mma, n'oge ahụ ọ dịtụghị nchebe, mana ugbu a ihe nchọgharị niile na-enye ohere ịchekwa ha n'ụzọ ezoro ezo, yana mgbakwunye iji chebe ha na paswọọdụ nnabata, na ya dị nchebe ma ọ bụ dịka enweghị ntụkwasị obi dị ka ịchekwa ha na sava ndị ọzọ na-eji igwe ojii paswọọdụ njikwa nwere ike ịbụ.
N'etiti ndị ọzọ a na-akpọghị aha, Chromium n'onwe ya na-abata n'uche, nke na-agụnyeghị ọrụ nsuso niile Google tinyere na Chrome, Ungoogled-Chromium, SRWare Iron, ma ọ bụ Iridium Browser, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ yiri ka ọ gaghị abụ ọnwa ole na ole. Melite ya ngwugwu maka nkesa na-agbasa na Debian (ị nwere ngwugwu emelitere maka Fedora, OpenSUSE, na Red Hat / CentOS.
Oh ma echefuru m banyere Waterfox!
Niile kwenyere na gị.
Na-efu ọtụtụ ndị nyocha: falkon, midori na ọtụtụ ndị ọzọ.
Zaghachi Jorge Venegas
Chromium na-enweghị Snap na Ubuntu / Mint:
Obi ike na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma, nke kachasị mma m jirila.
Enwere naanị ihe nchọgharị abụọ n’ebe ahụ: Firefox na Chromium. Ihe ndi ozo sitere na Chromium. Google Chrome na-eweta ụma nke nsị ọzọ ma ị ka na-akwado ya.
Ma nke ahụ bụ nke ọzọ, ị kwadoro maka Ubuntu (nke site n'ụzọ, oge ọ bụla ha wepụtara ụdị iberibe ya na ọnụ ọgụgụ dị ọnwa isii, na-achị ọchị, bịa kwuo okwu banyere ihe ọ na-eweta) karịa na nke ikpeazụ ị nwetara Manga na niile site ncha.
Ebe ọ bụla Debian dị, ewepụrụ Tuntuntu
Abd bụ Konqueror nke mepụtara kemgbe afọ 96 ma ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara firefox ma ọ bụ chromium, ọ na-eji njin nke aka ya akpọ KHTML nke mechara nweta na WebKit na Apple were ya iji zụlite Safari
Echere m na naanị ihe nchọgharị nke nwere nhọrọ nchekwa nergy bụ Opera. Ọ bara ezigbo uru maka laptọọpụ-
M nwere ya arụnyere na batrị dịruru ogologo karịa FF.
debianitafreoz konqueror na-adịghị depụtara na isiokwu.